चामल बन्नसक्छ 'फुड पोइजनिङ'को कारण : अमेरिकी आहारविद - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ टिप्स ∕ चामल बन्नसक्छ ‘फुड पोइजनिङ’को कारण : अमेरिकी आहारविद
चामल बन्नसक्छ ‘फुड पोइजनिङ’को कारण : अमेरिकी आहारविद
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७८ फागुन ३० गते, १३:३३ मा प्रकाशित
शरीरलाई स्वस्थ राख्न र पाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित राख्न आहारको सही चयन अति आवश्यक मानिन्छ। स्वस्थ खानाले शरीरलाई उर्जावान बनाउन मद्दत गर्छ भने खानाको अशुद्धताले पनि धेरै प्रकारका स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ । विशेषगरी अहिले तापक्रम बढ्दै गएकाले खानेकुराको शुद्धतामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । दूषित खानामा ब्याक्टेरिया, भाइरस र परजीवीहरू हुन सक्छन् जसले खाद्य विषाक्तता निम्त्याउँछ। खाना पकाउँदा वा पकाउँदा हुने लापरवाहीका कारण पनि यो समस्या हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार खाद्य विषाक्तताले वाकवाकी, बान्ता वा पखाला जस्ता स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। गम्भीर अवस्थामा, बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्न आवश्यक पर्दछ। हालै अमेरिकी आहारविद् कोरी एल रोड्रिग्वेजले सामाजिक सञ्जालमा यससँग सम्बन्धित एउटा भिडियो शेयर गर्दै हामीले दैनिक उपभोग गर्ने धेरै चीजहरूले फूड पोइजनिङको जोखिम बढाउन सक्ने बताएका छन् । आउनुहोस् केही यस्ता खानेकुराको बारेमा ।
भिजाएको गेडागुडी राम्ररी धुनुहोस्
हामीमध्ये धेरैजसोको दिनको सुरुवात गेडागुडीबाट हुन्छ। धेरै प्रकारको अंकुरित आहारको यो संयोजन स्वास्थ्यको लागि धेरै पौष्टिक मानिन्छ। तर के तपाईलाई थाहा छ कि यसलाई बनाउँदा लापरवाहीले खाना विषाक्तताको जोखिम बढाउन सक्छ? दाना भिजाएर धेरै प्रकारका ब्याक्टेरियाहरू बढ्न सक्छन्, त्यसैले काँचो वा पकाएर खानुअघि यसलाई धेरै पटक राम्ररी धुन नबिर्सनुहोस्।
चामलले कसरी खाना विषाक्त हुन सक्छ?
अधिकांश घरपरिवारमा भात बिनाको खाना अधुरो मानिन्छ। तर, के तपाईलाई थाहा छ कि यसले फूड पोइजनिङको जोखिम बढाउन सक्छ? आहारविद् कोरी एल रोड्रिग्वेज भन्छन्, ‘भात पकाएको धेरै घण्टासम्म नपकाइन्छ। यो बानी स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ। पकाएको भात धेरै बेर बाहिर नराख्नुहोस्। यसलाई तातो खानुहोस् वा पकाएको एक घण्टा भित्र फ्रिजमा राख्नुहोस्। यसो गर्नाले तपाईंले खाना विषाक्तताको जोखिम कम गर्न सक्नुहुन्छ।’
मासु खाद्य विषाक्तताको जोखिम बढाउने चीजहरू मध्ये एक हो। नपाकेको मासु खाँदा यो समस्याको जोखिम धेरै गुना बढ्छ । मासुमा धेरै प्रकारका ब्याक्टेरिया हुन्छन्, त्यसैले यसलाई राम्रोसँग पकाएर खाइयो भने यसले फूड पोइजनिङका साथै अन्य धेरै समस्याको जोखिम पनि बढाउन सक्छ। जमेको मासुले यो जोखिम अझ बढाउँछ। मासुलाई राम्ररी धोएर पकाएर खानुपर्छ ।
खर्बुजा खानु फाइदाजनक
गर्मीमा हाइड्रेसन कायम राख्न तरबूज–खरबुजाको सेवन निकै फाइदाजनक मानिन्छ । तर, यो किन्दा होसियार हुनुपर्छ। काटेको खरबुजा लामो समयसम्म नराख्नुहोस्। यसले खाद्य विषाक्तताको जोखिम धेरै बढाउँछ।